पेनिसिलिनहरूको सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी समुदाय प्रेस समुदाय, कल्याण कल्याण समाचार, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि जानकारी >> पेनिसिलिनहरूको सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
पेनिसिलिनहरूको सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
पेनिसिलिन १ 28 २। मा स्कटिश सूक्ष्म जीवविज्ञानी र चिकित्सक अलेक्ज्याण्डर फ्लेमिंगले पत्ता लगाएका थिए। यो पछि नाम दिइएको थियो पेनिसिलियम मोल्ड जब फ्लेमिंगले याद गरे कि मोल्डले एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरू प्रदर्शन गर्‍यो। पेनिसिलिनको खोज पछि मेडिसिनको संसारलाई पहिलो साँचो आधुनिक एन्टिबायोटिकको रूपमा परिवर्तन गर्दछ। आज, ब्याक्टेरिया संक्रमणको उपचार गर्न विभिन्न प्रकारका पेनिसिलिनहरू उत्पादन भएका छन्।
पेनिसिलिनको एन्टिबायोटिक वर्ग, उनीहरू कसरी प्रयोग हुन्छन्, र उनीहरूले के दुष्प्रभाव गर्न सक्छन् भन्ने बारे थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
ब्रान्ड नाम (सामान्य नाम) औसत नगद मूल्य एकलकेयर मूल्य अझै सिक
अमोक्सिल (अमोक्सिसिलिन) 20 २..99 per प्रति २०, २ mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू अमोक्सिसिलिन कूपन पाउनुहोस् अमोक्सिसिलिन विवरण
अग्मेन्टिन (अमोक्सिसिलिन / क्लावुलानेट) प्रति २०, -1२..99 मिलीग्राम टैबलेट अमोक्सिसिलिन / क्लावुलानेट कुपनहरू पाउनुहोस् Amoxicillin / clavulanate विवरण
Unasyn (एम्पीसिलिन / sulbactam) 16 ११०.66 प्रति १ 16, ((२-१) ग्राम समाधान पुनर्गठन एम्पीसिलिन / सल्ब्याक्टम कूपन पाउनुहोस् Ampicillin / sulbactam विवरण
डायसिल (dicloxacillin) 40 १०3.99 per प्रति ,०, mg०० मिलीग्राम क्याप्सूल डिक्लोक्सासिलिन कुपनहरू पाउनुहोस् Dicloxacillin विवरण
ब्याक्टोसिल (ओक्सासिलिन) 10 १०4 प्रति १०, १ ग्राम समाधान पुनर्गठन Oxacillin कूपन पाउनुहोस् Oxacillin विवरण
पेन VK (पेनिसिलिन V पोटेशियम) 28 40.67 प्रति २,, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट पेनिसिलिन V पोटेशियम कूपन पाउनुहोस् पेनिसिलिन V पोटेशियम विवरण
फाइजरपेन (पेनिसिलिन जी पोटेशियम) Per 47 प्रति १, 00०००००० इकाई समाधान पुनर्गठन पेनिसिलिन जी पोटेशियम कूपन पाउनुहोस् पेनिसिलिन जी पोटेशियम विवरण
अन्य पेनिसिलिनले समावेश गर्दछ:
जोसिन (पाइपरासिलिन र ताजोब्याक्टम)
टिमेन्टिन (टिकारसीलिन र क्लावुलानेट)
Permapen (पेनिसिलिन जी बेंजाथिन)
पेनिसिलिन भनेको के हो?
पेनिसिलिन एउटा समूहको हो एन्टिबायोटिक जुन सामान्यतया ब्याक्टेरिया संक्रमणको उपचारको लागि सिफारिस गरिन्छ। पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकको व्यापक वर्गको हिस्सा हो बीटा-लैक्टम एन्टिबायोटिक । यी एन्टिबायोटिक्सले उनीहरूको रासायनिक संरचनाको रूपमा बिटा-लैक्टम रिंग समावेश गर्दछ। पेनिसिलिनहरुमा ब्याक्टेरियाको धेरै भिन्न प्रकारहरुको बिरूद्ध कडा एन्टिमाइक्रोबियल गतिविधि हुन्छ। तिनीहरूलाई मौखिक ट्याब्लेटहरू, मौखिक क्याप्सूल, तरल निलम्बन, र नसा (IV) इंजेक्शनको रूपमा प्रशासित गर्न सकिन्छ।
पेनिसिलिनले कसरी काम गर्दछ?
पेनिसिलिनले ब्याक्टेरियाहरूलाई तिनीहरूको सेल भित्तामा मर्मत गर्न क्षमता रोक्दै काम गर्दछ। को ब्याक्टेरिया सेल भित्ता पेप्टिडोग्लाइकन भनिन्छ अणु मिलेर बनेको महत्त्वपूर्ण संरचना हो जसले कोषहरूलाई तिनीहरूको आकार राख्नमा मद्दत गर्दछ। उनीहरूको सेल भित्ता बिना, ब्याक्टेरिया बाँच्न सक्दैन, जुन फोर्सि l (लिसिस) र कोशिक मृत्युमा जान्छ। किनकि त्यसले सीधा ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्दछ, पेनिसिलिन जीवाणुनाशक एन्टिबायोटिक मानिन्छ। पेनिसिलिन सामान्यतया ग्राम सकरात्मक ब्याक्टेरियाहरूको बिरूद्ध प्रभावकारी हुन्छ, तर विभिन्न पेनिसिलिनहरूले अन्य प्रकारका ब्याक्टेरियाहरूलाई लक्षित गर्न सक्दछन्।
पेनिसिलिन केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
पेनिसिलिन कान, नाक, र घाँटी को ब्याक्टेरिया संक्रमण को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। यो साइनस, छाला, तल्लो श्वास नली, पेट, आन्द्रा, मिर्गौला र मूत्राशयको ब्याक्टेरिया संक्रमणको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। पेनिसिलिन केवल ब्याक्टेरियाहरूद्वारा हुने संक्रमणहरूको उपचारको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ अतिसंवेदनशील पेनिसिलिनमा।
पेनिसिलिनले निम्न उपचार पनि गर्न सक्छ:
पेनिसिलिन विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरिया बिरूद्ध प्रभावकारी हुन सक्छ:
के तपाइँ claritin पछि १२ घण्टा benadryl लिन सक्नुहुन्छ
प्राकृतिक पेनिसिलिनले पेनिसिलिन जी-जस्तो एन्टिबायोटिक समावेश गर्दछ, साथै पेनिसिलिन वी पोटेशियम सहित। यी पेनिसिलिनहरू ब्याक्टेरिया संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिने पहिलो एन्टिबायोटिकहरू मध्ये एक थिए। तिनीहरू ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सेल सेल सिन्थेसिसलाई अवरोध गरेर काम गर्दछन्, र तिनीहरू मुख्यतया ग्राम-पोजिटिभ ब्याक्टेरिया र केही ग्राम-नकारात्मक ब्याक्टेरियाहरू विरूद्ध प्रभावकारी हुन्छन्। प्राकृतिक पेनिसिलिनमा पेनिसिलिन जी र पेनिसिलिन भि।
प्राकृतिक पेनिसिलिनहरू जस्तै, aminopenicillins जीवाणु सेल भित्ता सिन्थेसिस अवरुद्ध गरेर काम गर्दछ। जे होस्, तिनीहरू ब्याक्टेरियाहरूको फराकिलो स्पेक्ट्रमलाई लक्षित गर्न सक्छन्; एमिनोपेनिसिलिन प्राय: ग्राम-पॉजिटिभ ब्याक्टेरिया, ईन्ट्रोकोकी, र केही ग्राम-नकारात्मक बेस्ली, जस्तै एच इन्फ्लूएन्जा र ई कोलाईको बिरूद्ध प्रभावकारी हुन्छ। एमिनोपेनिसिलिनहरू सामान्यतया बीटा-ल्याक्टमेज अवरोधक जस्तो क्लावुलानेट वा सल्ब्याक्टमसँग जोडिन्छ तिनीहरूलाई अधिक प्रभावकारी बनाउन। उदाहरणहरूमा एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, र हेटासिलिन समावेश छ।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम (antipseudomonal) पेनिसिलिन
ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वा antipseudomonal, पेनिसिलिन पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक समूहको समूह हो जसमा एमिनोपेनिसिलिन जस्ता एंटीबैक्टीरियल गतिविधि प्लस स्यूडोमनास बिरूद्ध अतिरिक्त गतिविधि र एन्टेरोब्याक्टर र सेराटिया प्रजातिहरूको निश्चित स्ट्रिनहरू हुन्छन्। अन्य पेनिसिलिनहरू जस्तै, एन्टिप्स्यूडोमोनल पेनिसिलिन बिटा-लैक्टमेज अवरोधकर्ताहरूको साथ लिइन्छ। एन्टिप्स्यूडोमोनल पेनिसिलिन सामान्यतया अर्को एन्टिबायोटिक वर्गले एमिनोग्लाइकोसाइड भनिन्छ जुन स्यूडोमोनस एरुगिनोसाले हुने संक्रमणहरूको उपचार गर्नका लागि दिइन्छ। एन्टिप्स्यूडोमोनल पेनिसिलिनका उदाहरणहरू पाइपरासिलीन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, र मेजलोसिलिन समावेश गर्दछ।
केहि ब्याक्टेरियाले बीटा ल्याक्टमेज उत्पादन गर्दछ, एक इन्जाइम जसले बीटा ल्याक्टम एन्टिबायोटिकलाई निष्क्रिय गर्दछ। बीटा-लैक्टमेज अवरोधक एक प्रकारको औषधि हो जसले बीटा-लैक्टम एन्टिबायोटिकको लागि ब्याक्टेरियाको प्रतिरोध लड्छ। तिनीहरूलाई सामान्यतया पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकसँग मिसाइन्छ जसले पेनिसिलिनलाई बिग्रिनुबाट रोक्छ, जसले यसको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्दछ। जब एक्लो प्रयोग गरिन्छ बिटा ल्याक्टमेज इनहिबिटरहरूसँग कुनै पनि जीवाणुरोधी गतिविधि हुँदैन। उदाहरणहरूमा क्लावुलानेट (वा क्लावुलनिक एसिड), सल्ब्याक्टम, र ताजोब्याक्टम सामेल छन्।
पेनिसिलिनेस प्रतिरोधी पेनिसिलिन
पेनिसिलिनेस प्रतिरोधी पेनिसिलिन पेनिसिलिनहरूको समूह हो जुन मुख्य रूपमा पेनिसिलिनेज उत्पादन गर्ने मेथिसिलिन-संवेदनशील स्टेफिलोकोकस अरियसको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया र समूह ए स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमणका साथै केही प्रकारको मेथिसिलिन-संवेदनशील स्टेफिलोकोकल संक्रमणको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रतिरोधी प्रकारका यी ब्याक्टेरियाहरूले पेनिसिलिनस भनिने इन्जाइम उत्पादन गर्दछ, जसले पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकलाई निष्क्रिय गर्न सक्दछ। पेनिसिलिनेस-प्रतिरोधी पेनिसिलिनका उदाहरणहरूमा ओक्ससिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, नाफेसिलिन, फ्लुक्लोक्सासिलिन, र क्लोक्सासिलिन समावेश छ।
कसले पेनिसिलिन लिन सक्छ?
पेनिसिलिन वयस्कहरूमा जीवाणु संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। पेनिसिलिन र प्रयोग गरिएको प्रकार्यको आधारमा खुराक भिन्न हुन्छ। वयस्कहरूमा, पेनिसिलिन खुराकहरू सामान्यतया मिलीग्राममा नापिन्छ।
पेनिसिलिन बच्चाहरूमा प्राय: सिफारिश गरिएको एन्टिबायोटिक हो। धेरै बाल्यकाल संक्रमणहरू जसले कान, नाक र घाँटीलाई असर गर्दछ प्राय जसो पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकको उपचार गरिन्छ। वरपर १०% बच्चाहरूको एउटा पेनिसिलिन एलर्जीको साथ पत्ता लागेको छ, यद्यपि धेरै जसो बच्चाहरू निदान गरिएको तिनीहरूसँग छैन सही एलर्जी एन्टिबायोटिकमा। उदाहरण को लागी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्टलाई एक साँचो एलर्जी मानिदैन। बच्चाहरूमा, पेनिसिलिन खुराकहरू सामान्यतया मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीरको वजनको हिसाबले गणना गरिन्छ।
के पेनिसिलिन सुरक्षित छ?
पेनिसिलिन संक्रामक रोगहरूको उपचारको लागि सामान्यतया सुरक्षित हुन्छ जब उचित खुराकमा दिइन्छ। पेनिसिलिनको उच्च डोज हुन सक्छ केन्द्रीय स्नायु प्रणाली विषाक्तता , जो दौरा रूपमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली विषाक्तताको जोखिम गुर्दे, वा मृगौली, समस्या भएकाहरूमा बढी हुन सक्छ।
विरलै अवस्थाहरूमा, पेनिसिलिनले एनाफिलाक्टिक प्रतिक्रियाहरू निम्त्याउन सक्छ। पेनिसिलिनलाई अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरूको ईतिहास भएको व्यक्तिहरूमा बेवास्ता गर्नुपर्छ। एनाफिलैक्सिसका लक्षणहरूमा दाउरा, खुजली, सूजन, र सास फेर्न समस्या हुन्छ। एनाफिलाक्टिक प्रतिक्रियाहरूलाई तत्काल मेडिकल ध्यान चाहिन्छ। पेनिसिलिनमा एलर्जीको इतिहास भएकाहरूले पनि पेनिसिलिन डेरिवेटिभ्स, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, र मोनोब्याक्टम एन्टिबायोटिक लिनु हुँदैन।
अमेरिकामा कति वयस्क मोटापेका छन्
पेनिसिलिन-प्रकारको एन्टिबायोटिकको विकल्प उपयुक्त नहुने अवस्थामा पेनिसिलिनमा एलर्जीको उपस्थिति पत्ता लगाउन बिरामीले छाला परीक्षण गर्न सक्छ। यदि छाला परीक्षण सकारात्मक छ,aडिसेन्सिटाइजेसन प्रक्रिया यो सहिष्णु र प्रभावकारी नभएसम्म बिस्तारै एन्टिबायोटिक प्रशासित गर्न सुरू गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ कुनै वर्तमान पेनिसिलिन फेब्रुअरी २०२१ को रूपमा सम्झिन्छ।
पेनिसिलिन भाइरस वा फgi्गाले गर्दा संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिदैन। एन्टिबायोटिक प्रतिरोध रोक्नको लागि, पेनिसिलिन केवल ब्याक्टेरियाको संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन पेनिसिलिनमा अति संवेदनशील हुन्छ। पेनिसिलिन केवल एक चिकित्सक बाट एक मान्य पर्चेको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ। पेनिसिलिन खुराक समायोजन वा गम्भीर गुर्दे समस्या भएका बिरामीहरूमा कम गर्न आवश्यक पर्दछ।
के तपाईं गर्भवती वा स्तनपानको बेला पेनिसिलिन लिन सक्नुहुन्छ?
पेनिसिलिन सामान्यतया गर्भावस्थामा र स्तनपानको समयमा प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ। जनावरहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छैन कि पेनिसिलिनहरूले भ्रुणलाई हानी पुर्‍याउने जोखिम बोक्दछन्। पेनिसिलिन जी यसको रोकथामको लागि एक प्रभावकारी एन्टिबायोटिक हो सिफलिस प्रसारण आमाबाट गर्भमा। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता गर्भावस्था वा स्तनपानको समयमा उचित एन्टिबायोटिक उपचारको लागि परामर्श लिनु पर्छ।
के पेनिसिलिनहरू नियन्त्रणित पदार्थहरू हुन्?
होईन, पेनिसिलिन एक नियन्त्रित पदार्थ होईन।
सामान्य पेनिसिलिन साइड इफेक्टहरू
पेनिसिलिनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू:
जिब्रो वा मुखमा सेतो वा कालो प्याचहरू
इन्जेक्शन साइट प्रतिक्रियाहरू जस्तै लालिमा, खुजली, र सूजन (जब एन्टिबायोटिक इंट्रावेनस मार्ग मार्फत प्रशासित गरिन्छ)
पेनिसिलिनको गम्भीर प्रतिकूल असरहरुमा:
केन्द्रीय स्नायु प्रणाली विषाक्तता
कम सेता रक्त कोष गणना
कम प्लेटलेट स्तरहरू
क्लोस्ट्रिडियोइड्स डिफिसिल-सम्बन्धित डायरिया
कम सेतो रक्त कोष गणना, वा ल्युकोपेनिया, नेफसिलिनको सामान्य प्रतिकूल प्रभाव हो। नलीमा दिइएको पेनिसिलिनको उच्च खुराकले कम प्लेटलेटको स्तर निम्त्याउन सक्छ, जसले रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्छ।
पेनिसिलिनले कोलोनमा सामान्य ब्याक्टेरियाको विकास बदल्न सक्छ र भनिने ब्याक्टेरियाहरूको अत्यधिक वृद्धि हुन्छ Clostridioides مشکل (पहिले को रूपमा परिचित क्लोस्ट्रिडियम मुश्किल )। यस प्रकारको ब्याक्टेरियाले pseudomembranous कोलाइटिस, वा कोलनको सूजन, र गम्भीर डायरिया निम्त्याउन सक्छ। जे होस्, हल्का पखाला एन्टिबायोटिकको साथ सामान्य हो, यदि पेनिसिलिन प्रयोग गरिएमा गम्भीर पखाला बढेमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
पेनिसिलिनजस्ता टिकारसिलीन र कार्बेनिसिलिन हृदय वा मिर्गौला समस्या भएका बिरामीहरूमा बेवास्ता गर्न वा निगरानी गर्न आवश्यक पर्दछ। यस प्रकारको पेनिसिलिनले रगतमा सोडियमको मात्रा बढाउन सक्छ।
पेनिसिलिनको कति खर्च हुन्छ?
धेरै पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक जेनेरिक संस्करणहरूमा उपलब्ध छन्। एन्टिबायोटिकको जेनेरिक संस्करण सामान्य रूपमा ब्रान्डको नाम भन्दा सस्तो हुन्छ जबकि समान रूपमा प्रभावकारी हुँदै जान्छ। पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक प्राय: मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले पनि समेट्छ। पेनिसिलिन V पोटेशियमको औसत खुद्रा लागत निर्धारित खुराकको आधारमा around 40 जति हुन सक्छ।
बिरामीहरूले पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकमा निर्माणकर्ताहरू र फार्मेसीहरूबाट विभिन्न बचत कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट बचत गर्न सक्दछन्। बचत कार्डहरू पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकको लागत कम गर्न सहयोगका लागि पनि उपलब्ध छन्।
यूटीआई रोकथाम र उपचारको लागि १ home घरेलु उपचार
भ्रायलर साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
एक राम्रो गैर उपवास रक्त शर्करा को स्तर के हो
कसरी छिटो फ्लू माथि प्राप्त गर्न
कहिले सम्म एक डेपो शट को लागी राम्रो छ
कसरी राम्ररी पर्चे औषधि को निपटान गर्न
2 वर्ष को लागी सबै भन्दा राम्रो ज्वरो को औषधि
म कसरी मेरो रक्तचाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्न सक्छु?
औषधि बनाम मित्र
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर